Flag nke Wales, akụkọ banyere dragọn ya | Akụkọ Njem
Ndị njem na ndị njem | | omenala, Ebe njegharị, Getaways Europe, General
Ọ dịtụla onye ọ bụla chere ihe kpatara ya a dragon pụtara na ọkọlọtọ nke Wales? Enwere ike kpaa ọtụtụ akụkọ iji kọwaa ajụjụ a; ọ bụrụ na ha bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị, otu akụkọ ahụ ga-ekpughe ya.
Ihe dị mkpa banyere ihe a niile bụ na ọkọlọtọ nke Wales enweela akara ya, Dọrọ goch, Dragọn Welsh ma ọ bụ dragon uhie, ọ bụkwa ya kacha ewu ewu na Great Britain.
1 Akụkọ banyere ọkọlọtọ nke Wales
2 Ọkọlọtọ nke Wales, akara ngosi nke mpako
Akụkọ banyere ọkọlọtọ nke Wales
La welsh ọkọlọtọ akụkọ na-ezo aka na dragọn na-acha uhie uhie mgbe niile na dragon na-acha ọcha nke bụ onye ọjọọ na akụkọ ahụ.
Nsogbu ahụ na-amalite ịbawanye njọ mgbe achọpụtara ya mkpọtụ ndị dragọn na-ewepụta n'ọgụ ha na-alụ mgbe niile na-emerụ ahụ maka ndi mmadu. Kedu? Nsonaazụ ahụ bụ na ndị ahụ metụtara mechara bụrụ ndị nwere ume na-enweghị, na-enweghị ụmụ.
Eze nke Great Britain n’oge ahụ bụ Llud, n’ịbụ onye a kpaliri ịchọta ihe ngwọta maka nsogbu ahụ a na-ajụ, o kpebiri ịrịọ enyemaka site na Llefelys, nwanne ya. Llefelys bụ agwa nke amamihe dị ukwuu ma chee nsogbu ahụ ihu, ọ zara azịza ya.
Brothersmụnna nwoke a gwupụtara otu oghere dị na etiti Britain wee jupụta ya na mmiri na-egbu egbu ma si otú ahụ, mgbe dragọn ahụ drunkụchara mmanya ha nwere ike ịkwụsị atụmatụ nke kpochapu ha. Dragọn ahụ dabara n'ọnyà ahụ, na Snowdonia dị na mgbago mgbago ugwu obodo ahụ.
Ha nọrọ n'agha ruo ọtụtụ narị afọ. Oge na-aga n’ihu na mgbe eze Vortigen ọhụrụ na-ewu nnukwu ụlọ nnukwu mmegharị ahụ na-aga n’ihu na-abịa site na ntọala ndị ahụ na-eme ka eze chọpụta dragọn ahụ.
King Vortigen kpebiri ka ya na Merlin gbaa izu ma gwa ya ka ọ hapụ ndị dragọn ahụ. Mgbe ọtụtụ narị afọ gbochiri nnwere onwe, ndị dragọn ahụ na-aga n'ihu na mgba ha, oge a nke ọdịdị dị oke mkpa, ebe onye mmeri bụ dragon ahụ na-acha uhie uhie, onye lụrụ ọgụ na-agbachitere ala.
Site na ihe omume a dragọn ahụ na-acha ọbara ọbara ghọrọ akara ọkọlọtọ wales.
Ọkọlọtọ nke Wales, akara ngosi nke mpako
Maka Welsh ọ bụ mpako ịhụ dragon na-acha uhie uhie na ọkọlọtọ obodo ha, anụmanụ ahụ dị egwu nke a nabatara n'uche ndị mmadụ, nke mere ya ji ewu ewu.
O nwere ndị kwenyere na nke ahụ dragọn ahụ na-acha uhie uhie bụ ihe nnọchianya nke onye bi na Welsh Ọfọn, n'agbanyeghị ọnọdụ ahụ, ọ na-ebili mgbe niile na-ebuli isi ya elu iji rụchaa ihe fọdụrụ ma ọ bụ kwụsịtụrụ. Akụkọ a nọgidere na-aga n'ihu ma gbanwee ma jiri ọkọlọtọ mba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Ọkọlọtọ Wales
Cedar, osisi mba Lebanon